Incazelo Yamagama »Isichazamazwi esisemthethweni sencazelo nemvelaphi
Amagama nezibongo zesiNgisi
Amagama amantombazane aseBhayibhelini
Amagama ezingane adumile
Amagama aseBhayibhelini abafana
Amagama ezinja adumile
Amagama ezinja ze-chihuahua
Amagama ezinja zePitbull
Amagama ezinja ezincane
Amagama wekati laseGibhithe
Amagama wekati adumile
Okusho igama lokuqala Ana
Okusho igama lokuqala Paula
Incazelo yesibongo Sofia
Okusho igama lokuqala Laura
Okusho igama lokuqala Alba
Incazelo Yamagama - Isichazamazwi Esisemthethweni Samagama
Namanje awazi ifayela le- incazelo yegama lakho? Ngabe ufuna ukwazi ukuthi isukaphi futhi ivela kuphi? Noma ungadinga i- igama lendodana yakho?
Akunandaba ukuthi yisiphi isizathu sakho sokuthola incazelo yegama, usekhasini elihle kakhulu ukulithola. Vuliwe www.meanings-names.com sikunikeza isichazamazwi esisemthethweni samagama anencazelo yawo nemvelaphi yawo.
Kuleyo webhusayithi uzothola amagama amaningi nencazelo yawo. Uzokwazi nokwazi imvelaphi, umlando, abangcwele, kanye neminye imininingwane eminingi. Siphinde sikunikeze uhlu lwabantu abadumile abanalelo gama.
1 Kusho ukuthini igama lakho?
2 Uhlu lwamagama we-AZ
3 Yini ongayilindela kwi-Name Meaning Website?
4 Yini ozoyithola ngencazelo yamagama?
5 Thola incazelo yamagama ezingane, zabafana nezamantombazane, MAHHALA ngokuphelele
6 Uyini umsuka wamagama?
6.1 IsiGreki, isiLatini nesiNgisi, umsuka wamagama
7 Kungani nginentshisekelo yokwazi incazelo yamagama?
7.1 Usuwele ezingubeni zothando
7.2 Awazi ukuthi uzoyibiza ngokuthini indodana yakho?
7.3 Ukwazi incazelo yegama lakho uzokwazi ukuzazi kangcono kakhulu
Kusho ukuthini igama lakho?
Sinefayela le- ikhathalogi ebanzi enamakhulu amagama kukho konke ukunambitheka. Kunamagama amaningi ngeSpanishi kepha futhi sinikeza amagama ngezinye izilimi ezifana nesiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiBasque noma isiCatalan, ukunikeza izibonelo ezimbalwa.
Noma ngabe ufuna igama lesimanje noma elinye elijwayelekile, uma ufuna igama elifushane - ebelinemfashini eminyakeni embalwa edlule - noma ukhetha igama elide, kule webhusayithi ungakuthola okudingayo.
Sinawo amagama anezindikimba ezifuywayo nezilwane ezinjengamagama ezinja noma amagama amakati. Kungabonakala kulula kepha ukukhetha igama lesilwane sakho sinezinkinga zalo ngoba abanikazi abaningi bafuna ukukhetha igama lomlingani wabo ngokuya ngosayizi wabo, umbala wesikhumba sabo noma umlingiswa wabo.
Ngezansi ungathola ifayela le- uhlu oluphelele lwamagama a-odawe ku-AZ, ukwenza kube lula kuwe ukusebenzisa iwebhu futhi uthole ngokushesha igama olifunayo. Uma ufuna ukuthola lonke ulwazi mayelana nencazelo yegama olifunayo, kufanele ukhethe incwadi oyifunayo bese uqhafaza kuyo.
Uhlu lwamagama we-AZ
Amagama aqala ngo-A
Okusho igama lokuqala Alice
Okusho igama lokuqala Adriana
Okusho igama lokuqala Adrian
Okusho igama lokuqala Antonio
Okusho igama lokuqala Andrés
Okusho igama lokuqala Andrea
Amagama aqala ngo-B
Okusho igama lokuqala Blanca
Okusho igama lokuqala Barbara
Okusho igama lokuqala Benjamin
Amagama aqala ngo-C
Okusho igama lokuqala Cristina
Okusho igama lokuqala Carmen
Okusho igama lokuqala Cristian
Amagama aqala ngo-D
Okusho igama lokuqala Dylan
Okusho igama lokuqala Diego
Incazelo yesibongo Daniel
Amagama aqala ngo-E
Incazelo ka-Esteri noma u-Esteri
Okusho igama lokuqala Elena
Okusho igama lokuqala Elizabeth
Amagama aqala ngo-F
Okusho igama lokuqala Fabian
Meaning of Felipe
Okusho igama lokuqala Francisco
Okusho igama lokuqala Fernando
Okusho igama lokuqala Fernanda
Amagama aqala ngo-G
Gloria kusho igama
Meaning of Gustavo
Okusho igama lokuqala Gael
Okusho igama lokuqala Guadalupe
Thola Gabriel kusho igama
Amagama aqala ngo-H
Okusho igama lokuqala Hugo
Amagama aqala ngo-I
Incazelo ka-Ignacio noma uNacho
Okusho igama lokuqala Isabel
Amagama aqala ngo-J
Okusho igama lokuqala Jessica
Okusho igama lokuqala Jennifer
Okusho igama lokuqala Jonathan
Okusho igama lokuqala Javier
Okusho igama lokuqala Juan
Amagama aqala ngo-K
Okusho igama lokuqala Kiara
Okusho igama lokuqala Karina
Okusho igama lokuqala Katherine
Okusho igama lokuqala Karla
Okusho igama lokuqala Kevin
Okusho igama lokuqala Karen
Amagama aqala ngo-L
Okusho igama lokuqala Lucas
Okusho igama lokuqala Lorena
Okusho igama lokuqala Lucia
Okusho igama lokuqala Lía
Amagama aqala ngo-M
Okusho igama lokuqala Monica
Okusho igama lokuqala Martina
Okusho igama lokuqala Martin
Amagama aqala ngo-N
Amagama ane- Ñ
Incazelo kaNowa noma uNoa
Nicole kusho igama
Okusho igama lokuqala Natalia
Amagama aqala ngo-O
Amagama aqala ngo-P
Okusho igama lokuqala Paulina
Okusho igama lokuqala Pamela
Okusho igama lokuqala Patricia
Okusho igama lokuqala Paola
Amagama aqala ngo-R
Okusho igama lokuqala Roberto
Okusho igama lokuqala Rafael
Incazelo ka Rodrigo
Okusho igama lokuqala Rosa
Okusho igama lokuqala Rocío
Okusho igama lokuqala Raúl
Amagama aqala ngo-S
Okusho igama lokuqala Susana
Okusho igama lokuqala Silvia
Okusho igama lokuqala Sandra
Okusho igama lokuqala Sebastian
Amagama aqala ngo-T
Okusho igama lokuqala Tania
Okusho igama lokuqala Thiago
Amagama aqala ngo-U
Amagama aqala ngo-V
Veronica kusho igama
Okusho igama lokuqala Vanessa
Okusho igama lokuqala Valeria
Okusho igama lokuqala Valentina
Amagama aqala ngo-X
Amagama aqala ngo-Y
Incazelo ka Yesenia
Amagama aqala ngo-Z
Yini ongayilindela kwi-Name Meaning Website?
Kuleli khasi ngeke sikunikeze kuphela i- incazelo yegama lakho. Siyiwebhusayithi eyinkomba enetheni, ekwazi ukukunikeza imininingwane engaphezulu kunencazelo elula nje.
Yini ozoyithola ngencazelo yamagama?
Origen. Yini indaba ehambisana negama lakho? Yini i-etymology? Uyazi ukuthi ziyini izimpande zolimi oluvela kuzo? Uma ufuna ukwazi kabanzi ngegama lakho, kuzophoqeleka ukuthi uqale ngokufunda ngemvelaphi yayo emlandweni.
Ubuntu. Ngabe ungathanda ukwazi ukuthi hlobo luni lomlingiswa okufanele ube nalo ngokwegama lakho? Ngabe ukuthanda ezothando kuholele kuwe? Ingabe kufanele ube nokusondelana kwabantu okususelwa egameni lakho? Ngabe uzoba nenhlanhla othandweni? Kule webhusayithi ungathola imininingwane ethe xaxa mayelana nendawo oya kuyo.
I-Santoral. Uyazi ukuthi nini ngcwele wakho, noma owomngane noma womuntu okhethekile? Lapha ungakucacisa futhi wazi usuku oluqondile losanta wakho.
Idume ngegama elifanayo. Yibaphi abantu abadumile ababizwa ngegama lakho? Ungathanda ukuqamba ingane yakho elandelayo ngesithixo sakho? Kunamagama athandwa kakhulu ongazisekela kuwo… futhi ukusebenzisa igama labantu abadumile kuyinto ehlala imfashini njalo.
Okuncishisiwe (hypocoristic): Yilawo magama asetshenziswa njengophawu lokusondela, ngisho nabantu abaseduze kakhulu balisebenzisa kakhulu kunegama uqobo. Lapha ungathola okuvelele kakhulu futhi okuvame kakhulu eSpanishi.
Curiosities. Amagama afanele awagcini nje ngokugcina umlando ophelele ngemuva kwawo, kepha futhi nazo zonke izinhlobo zezimanga ezizosenza sikhefuzele. Abanye bebeyingxenye yamasiko okhokho kusukela ekuqaleni kwesikhathi, bahlotshaniswa nonkulunkulu, ama-landscapes, amadolobha futhi kube ugqozi lokuthi balolonge imisebenzi emikhulu yesintu. Kule webhusayithi, uzokwazi nokuthola lolu lwazi ngenxa ye-yourdomain-nombres.com.
Ngabe igama lakho lihunyushelwe kwezinye izilimi? Uyazi ukuthi inokwehluka kwesiNgisi? Ungabhala kanjani ngesiNtaliyane, isiFulentshi ... noma ngesiRashiya? Uke wacabanga ukuthi ungathanda igama kangcono kolunye ulimi? Sikwenza kube lula kuwe ukuze wazi.
Ingabe igama lakho liyahambisana nelomlingani wakho?. Kunamagama ahlobene nabanye, kanti amanye ahluke ngokuphelele. Kufanele sazi kahle ukuthi umuntu uhambelana kakhulu noma kancane yini ukuthandana, ukungena ebudlelwaneni noma ukwazi ukuthi uthembekile ngempela yini. Kungenzeka ukuthi umuntu oyedwa uncike kakhulu, kanti omunye unendawo eningi yokungathembeki, futhi lokhu kungaziwa ngegama.
Ukubalwa kwezinombolo. Amagama ahlanganiswa nezinombolo, futhi lezi zinombolo zihlobene nenhlanhla nenhlanhla. Akufanele ukhohlwe ngale mininingwane.
Nazi izibonelo ezimbalwa zalokho esikutshela khona: Incazelo kaPedro y Incazelo yesibongo Sofia.
Thola incazelo yamagama ezingane, zabafana nezamantombazane, MAHHALA ngokuphelele
Njengoba sesivele siphawule, kungenzeka ukuthi ufuna incazelo yegama ukuze wazi ukuthi ilungele ingane yethu yesikhathi esizayo yini. Sizoba nentshisekelo yokuthola imininingwane eminingi ngangokunokwenzeka ukwazi ukuthi ngabe ilungile yini.
Singalithanda igama kakhulu, kepha asazi umsuka walo, izimpande zalo, nokuthi lolu lwazi lungakwenza ushintshe umqondo wakho. Ngokuthola imininingwane "etafuleni", kuzoba lula ukwenza isinqumo.
Thola igama eliphelele kulula ukubonga kulezi zinhlu ezilandelayo:
Amagama ezingane. Lapha ungathola amagama ezingane, ethandwa kakhulu ezweni lakithi nasemazweni aphesheya, lawo asephenduke umkhuba, i-rarest ezodonsa ukunaka kwethu kusukela kumzuzu wokuqala, wesimanje, wokuqala, owaqanjwa….
Amagama ezingane zoqobo nezinhle. Uma usuvele uyazi ukuthi ingane yakho izoba ngumfana, lapho-ke ungachofoza lapha bese uthola amagama oqobo. Uzothola ukukhethwa kwezinketho ezingavamile, nencazelo yazo. Nathi sinawo amagama aseBhayibhelini kubafana y amagama adumile ezingane.
Amagama entombazane enhle. Futhi uma usuvele uyazi ukuthi kuzoba intombazane, lapha ungathola imibono ezokuvumela ukuthi uthathe isinqumo sakho. Ungathola amagama anamuhla noma amancane, anencazelo ekhethekile, angavamile, waseBhayibhelini, nencazelo yalo, njll.
Amagama kwezinye izilimi. Uma ungalitholi igama elithandekayo ngeSpanishi, mhlawumbe singaya kolunye ulimi. Ukukhetha igama ngolunye ulimi kuyinkimbinkimbi kakhulu kunalokho okubonakala, ngoba kungenzeka ukuthi asiyazi incazelo eqondile, noma ukuhumushelwa kolunye ulimi. Lapha ungathola uhlu oluhle lwe- Amagama nezibongo zesiNgisie Catalan, ama-chinos, isi-japanese, IsiHeberu nangezinye izilimi eziningi. Ngokuchofoza isigaba esihambisanayo, zonke zizoqala ukuboniswa.
Amagama ezifuywayo. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ungalikhetha kanjani igama lesilwane esifuywayo, ngaphezu kwanoma yini ngoba yilo ozolisebenzisa impilo yalo yonke. Lesi sigaba sizokusiza ukuthi uthole Amagama ezinja, onogwaja, amakati, noma esinye isilwane onaso. Uzokwazi ukuthola imibono eminingi ezokuvumela ukuthi uthole igama elihle ngokuya ngezimpawu zomngane wakho omncane. Sinezinto ezifanayo nabesifazane ukuthola i- amagama amahle kakhulu ama-bitches y amagama amakati.
Uyini umsuka wamagama?
Iqiniso ukuthi alikho igama elisha elisunguliwe. Singasho ukuthi i- iningi lamagama lasungulwa eminyakeni eminingi, eminingi edlule. Esikutholayo namuhla ukwehluka kwalawo magama, yize kukhona amanye eza kithi ngokuphelele.
Ungacabanga ukuthi incazelo yegama ayibalulekile, kanti empeleni ibalulekile. Isibonelo esihle igama le- Silvia, lo othi "Owesifazane Ongajwayelekile" futhi unezimpande zakhe ngesiLatini.
IsiGreki, isiLatini nesiNgisi, umsuka wamagama
Iningi lamagama amanje anezimpande zesiGreki, isiLatin noma i-Anglo-Saxon. Ekuqaleni ungahle ungakuniki ukubaluleka, kepha empeleni kuyakwenza, futhi okuningi. Isibonelo, phakathi kwazo zonke izincazelo zamagama u-Elena ungenye yezinto ezithakazelisa kakhulu, ngoba kusho "Okungajwayelekile", igama elivela esiLatini.
Esinye isibonelo esihle sokuqonda ukubaluleka kwencazelo yamagama sitholakala ku- incazelo ka-Andrés Lokhu kunezimpande esiGrekini futhi kusho ukuthi "onesibindi, ohloniphekile."
Njengesibonelo sokugcina, i- Igama likaRicardo, kusho ukuthi "iNkosi ebabazekayo", futhi izimpande zayo zingesiJalimane.
Uma ufuna ukuphenya i- incazelo yamagama Ngokwakho, awunakuzikhethela ngaphandle kokuphendukela eKoran noma eBhayibhelini, ubone ukuthi zihambe kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Manje, kunamanye amagama amanje angaveli kumarekhodi asendulo anjalo. Isibonelo, igama le- Iker okokuqala kusuka ezweni laseBasque.
Uma ufuna ukwazi i-etymology nemvelaphi yamagama, kuyadingeka ukuthi ubuyele kuma-holograph anjengeKoran noma i-Holy Bible. Kodwa-ke, kunamagama asesimanjemanje kakhulu, ngoba asetshenziswa okokuqala kungekudala, njenge-Iker, eyaqala ukusetshenziswa Ezweni laseBasque.
Kungani nginentshisekelo yokwazi incazelo yamagama?
Ingabe kuyathandeka ngempela ukwazi i- incazelo yegama? Iqiniso ukuthi iningi labantu licabanga ukuthi cha, lelo gama linjalo nje.
Manje, kubaluleke kakhulu kunokubukeka, futhi kunezizathu eziningi ezikubonisayo. Lapha sifunda ezinye ezibaluleke kakhulu.
Mhlawumbe wake wazibuza yini ukusetshenziswa kokwazi ngempela incazelo yamagama… Lapho-ke unenhlanhla ngoba abantu abaningi abajwayele ukucabanga ngakho ezimpilweni zabo zonke.
Uwele ku izindlawu zothando
Isizathu esikhulu sokuthi kungani kuvame ukufunwa incazelo yegama Kungenxa yokuthi umuntu omusha ungene empilweni yethu futhi siyayithanda. Ngale ncazelo sizofuna ukwazi kabanzi ngaye. Sizokwazi ukwazi ukuthi ubuntu bakho bunjani nokuthi siyahambisana yini noma cha.
Ngenxa yemvelaphi nencazelo yamagama singathola ukuthi singahlanya kanjani othandweni kulowo muntu esimthanda kakhulu. Sizokwazi ukuthi iqhinga esinalo emqondweni lizosebenza yini, noma uma kufanele sibheke elinye elingcono.
Othandweni konke kuhamba, futhi ukwazi kabanzi ngobuntu bomuntu, ngenxa yencazelo yegama, kungasiza kakhulu kunalokho esikucabangayo. Ungase futhi usitshele ukuthi umlingiswa wakho unjani noma ukuthi bekunjani phambilini.
Ake ucabange ukuthi ufuna ukuyenga umuntu futhi incazelo yegama lakhe isho amandla, ukukhanga nokuyenga. Kungenzeka ukuthi, ukunaka lezi zici, nguyena okukhohlisa. Kodwa-ke, kukhona namanye amagama okuthi, ngokwencazelo yawo, akhombise ukuthi ubunzima bokunqoba buphezulu.
Kunoma yikuphi, ukwazi incazelo yegama kukusiza ukwazi ukuhambisana kwalo.
Awazi ukuthi uzoyibiza ngokuthini indodana yakho?
Ukufuna incazelo yegama kungasisiza ekutholeni igama eliphelele lendodana yethu yesikhathi esizayo o indodakazi, ukuba nohlu lwemibono lapho singenza khona isinqumo sethu.
Sikhuluma ngesinqumo esibucayi, futhi yilokho ingane izobizwa ngalelo gama kuze kube phakadeIzokuchaza ubuntu bakho ngisho nangendlela izwe elizokubona ngayo.
Akufanele nje kuphela siqondiswe "ukuthi kuzwakala kanjani", kodwa kufanele futhi sifunde imvelaphi, umlando, i-etymology, izimpande, kanye neminye imininingwane ehlobene nayo. Kufanele futhi uhlaziye ukuthi iziphi izinhlamvu endabeni ezazibizwa ngendlela efanayo.
Ngabe uzoba nesibindi, athembeke, ngamanani wensimbi, abe namahloni, abe nothando, angenise, abe nobungane? Igama elihle elifanele lingenza umehluko.
Inketho ejwayelekile kakhulu ukukhetha i- igama lebhayibheli. Ngalo mqondo, bheka umlingiswa oseBhayibhelini onikeze lelo gama ukuphila, kanye nencazelo yalo.
Kuyo yonke le webhusayithi uzothola amanye amathiphu amaningi azokusiza wenze isinqumo.
Ukwazi incazelo yegama lakho uzokwazi ukuzazi kangcono kakhulu
Ukwazi ukuthi igama lakho lisho ukuthini kuzokusiza ukuthi uthathe uhambo lokuzitholela wazi okuningi ngawe, ukwazi amandla akho, ubuthakathaka bakho, kanye nanoma yisiphi esinye isici sobuntu bakho.
Iyamangaza indlela abantu abangakhulumi ngayo lapho beyazi incazelo yegama lakhe, futhi ngukuthi babubona ngempela ubuntu bakhe.
Uma wazi ukuthi ungubani, ungazamukela ngaleyo ndlela.
Ekugcineni, Esinye isizathu sokuthi kungani unentshisekelo encazelweni yamagama ukuthi ungathanda ukuzazi kangcono. Ukufunda incazelo kuzokunothisa ngaphakathi, kufanele sonke sikufune okungenani kanye ezimpilweni zethu.
Uma uvame ukugoba emuva ukufeza izinhloso zakho, ungazizwa wehlukile uma uqhathaniswa nabanye, ngoba akekho owenza imizamo efana neyakho. Kungenzeka ukuthi, ngokwegama lakho, uyaphikelela, nokuthi unezimfanelo okungekho omunye onazo
Njengoba uqinisekisile, uma kwazi bani incazelo yamagama, ngeke uthole indawo engcono kunale webhusayithi izincazelo-ames.com. Ungaba nayo yonke le datha mahhala.
Uma kukhona igama esingenalo kuwebhusayithi yethu, sincoma ukuthi ulikhombise nge isigaba sokuxhumana sekhasi.
© 2022 | meanings-names.com: isichazamazwi esisemthethweni samagama nemvelaphi | Ngu-Ignacio Andújar